Bishnu Majhi -- Top Singer in Nepal being captured for years
Topic: Bishnu Majhi -- Top Singer in Nepal being captured for years
Author Topic: Bishnu Majhi -- Top Singer in Nepal being captured for years (Read 3178 times)
« on: August 15, 2014, 12:06:10 PM »
Bishnu Majhi is told to be kept in captivity by her husband...
कवि तथा कलाकार बादल घिमिरेले लोक गायीका विष्णु माझीलाई उनका श्रीमानले नजरबन्दमा राखेको भन्दै उनको विषयमा कुरा उठाउन सञ्चार माध्यम र अधिकारकर्मीलाई आग्रह गरेका छन् । विष्णु माझी चर्चित लोक गायीका भएपनि उनको चरम शोषण भैरहेको भन्दै उनले फेसबुकबाट यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनको फेसबुक विज्ञप्ति यस्तो छः
लगभग तीन बर्षको अन्तरालपछि पुनस् गायिका विष्णु माझीको बारेमा केही लेख्दैछु बिष्णुको बारेमा आवाज उठाए वापत् यो भन्दा अगाडी मलाई अपरिचितबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको थियो तर यसपटक पनि जीवनलाई अचानोमा राखेरै भए पनि हिम्मत जुटाएको छु चर्चित लोक गायिका विष्णु माझी स्याङ्जा जिल्ला चापाकोट नगरपालिका -साविक रत्नपुर – काली नदीको किनार खोरियाघाटमा जन्मेकी हुन् जुन स्थान वरिपरि गायक कलाकार भगवान भण्डारी , बद्री पंगेनी , एकनारायण भण्डारी ,रूपक डोटेल , रामजी खाँण आदि जन्मिएको भूमि हो मेरो घरबाट विष्णुको घर पुग्न लगभग पन्ध्र मिनेटको दुरी पर्छ विष्णुको बारे पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यममा आवाज उठ्न थालेको छ म चाहन्छु यथार्थ वाहिर आओस् र विष्णुले बाँकी जिन्दगी भूमिगत रूपमा बिताउन नपरोस्
एक दशक अगाडी ठ्याक्कै साल भूलेँ बुटवल महोत्सवबाट विष्णुको जादुयी स्वर सुनेर सुन्दरमणी अधिकारीले गायिका बनाउँछु भनेर विष्णुलाई काठमाण्डौँका लागि रात्रीबस चढाएका थिए आज विष्णु यो देशकी महंगी र चर्चित गायिका त बनिन् तर सुन्दरमणीले चढाएको विष्णुको जिन्दगीको रात्रीबस कहाँ पुग्यो कसैलाई पत्तो छैन ( लाग्छ विष्णु स्वयं अनभिज्ञ छन् विष्णुको स्वर नसुन्ने त यो देशमा बिरलै होलान् तर विष्णुको भूमिगत जिन्दगीको बारेमा कमैलाई थाह होला देशकै चर्चित गायिका कुनै सञ्चार माध्यममा छाउँदिनन् न त देश विदेशको कन्सर्टमै देखा पर्छिन् न उनीसंग आफ्नो घर छ न एउटा मोबाइल आखिर विष्णुलाई यस्तो कस्ले बनायो रु उत्तर स् सुन्दरमणी अधिकारीले विष्णु गीत गाँउछिन् सुन्दरमणी पैसा बुझ्छन् विष्णुको जिन्दगीको रिमोट सुन्दरको हातमा छ लाग्छ विष्णुले श्वास फेर्न पनि अनुमति सुन्दरकै लिनुपर्छ र ?
हुन त केही बर्ष अगि सुन्दरले विष्णुलाई बिहे गरे भन्ने सुनियो तर बिष्णुले गाएर कमाएको करोडौँ पैसासंग गरे बिष्णुसंग थाह भएन आफ्नै श्रीमतीलाई भूमिगत शैलीमा बाँच्न विवश तुल्याउने अधिकार श्रीमानलाई हुन्छ रु विष्णु सुन्दरमणीको नजरबन्दमा छिन् ,उनको अवस्था के छ कसैलाई थाह छैन र न त उनका पिता तारा माझीलाई थाह छ न दाजु बाबुराम माझीलाई नै गीत त गाउँछिन् अझै पनि तर रोबोट शैलीमा रिमोट सुन्दरको हातमा छ अन्तमा विष्णुको बारेमा यथार्थ बाहिर किन ल्याउँदैनन् यो देशका पत्रकारहरू रेखा थापाको पाइन्ट एक इन्च तल झरे हेडलाइन खबर बनाउने पत्रकार महोदयहरू किन चुपचाप छन् र ? डन चरी मारिँदा सदन अवरूध्द गराउने दलहरू के गरिरहेका छन् रु यो देशमा महिला अधिकारकर्मी छन् कि छैनन् ? छन् भने कहाँ रत्यौली खेलेर बसिरहका छन् ? हामी सम्पूर्ण संगीतप्रेमीहरूलाई एकमुष्ट जवाफ चाहियो ?
यस अघि गायीका विष्णु माझीको भूमिगत जीवन शैलीको विषयमा नेपाल साप्ताहिकमा पनि एउटा फिचर प्रकाशित भएको थियो । उक्त फिचरका लेखक पत्रकार गोकर्ण गौतमले पनि विष्णु माझीलाई उनीसँग विवाह गरेको भनिएका कलाकार सुन्दरमणि अधिकारीले सम्पूर्ण नियन्त्रणमा राखेको उल्लेख गरेका थिए । उनले लेखेका छन् पाँच हजार गीतमा स्वर भरिसकेकी र दशकभन्दा बढी समयदेखि लोकगायनमा जमेकी बिष्णुको जीवन गुममान छ, लगभग भूमिगत शैलीमा । एक दशकको बीचमा उनी कुनै सार्वजनिक समारोह वा सञ्चारमाध्यममा देखा परेकी छैनन् । एउटा गीत गाएको अरु कलाकारले ६ ,७ हजार रुपियाँ बुझ्ने बिष्णुको नयाँ तस्बिर बाहिर नआएकै आठ बर्ष बित्यो । स्वदेश तथा विदेशका सांस्कृतिक कार्यक्रममा उनको अत्यधिक माग छ तर कतै देखिन्नन् । समकक्षी कलाकारसँग उठबस छैन् । कतिपय भने स्टुडियोमा गीत रेकर्ड गराउँदा पनि उनले पर्दा लगाएर गाउने गरेको एक रेकर्डिस्टको भनाई छ ।
गाएरै सवैभन्दा धेरै कमाउनेमध्येकी यी लोकगायिकाको जीवनशैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जस्तो सञ्चारप्रविधिको यो युगमा उनीसँग मोवाइलसमेत छैन । उनको काठमाण्डू बसाइबारे पनि धेरै जानकार छैनन् । यति चर्चित गायिका किन गुमनाम छिन त रु किन समाजमा घुलमील भएकी छैनन रु सोसल चार्म सिर्जना गर्न चाहन्न् रु उनीवरिपरि घुम्ने यिनै प्रश्नले नेपाली लोकगायन करिव दशकदेखि अनुत्तरित छ । बिष्णुको करिअरलाई नजिकबाट नियालीरहेका र लोकसंगीतमा सक्रिय स्रष्टाहरु उनको जीवनशैली गुमनाम हुनुको कारण मान्छन् सुन्दरमणी अधिकारीलाई ।
बिष्णु माझी नेपाली लोक र दोहोरी क्षेत्रकी उज्वल नक्षत्र हुन् । उनका गीत सुन्नेहरुले पनि उनको ब्यक्तिगत जीवनको बारेमा जानकारी राख्दैनन् ।
बिष्णु माझी ... सत्य के हो ??
« Reply #1 on: August 18, 2014, 01:13:37 AM »
हरेक नेपालीले चलाउने सामाजिक सञ्जालमा लोक गायिका बिष्णु माझीको प्रसंग समेटिएको छ । नेपालकी निक्कै कर्णप्रिय गायिका भएर पनि होला उनको प्रसंगले बजार तातेको छ । कतै श्रीमानले बन्धक बनाएको त कतै उनकै स्वभावबारे टिकाटिप्पणी चल्न थालेको छ । तर यसरी टिकाटिप्पणी चलिरहँदा उनको गायकी र कामबारे भने छोइएको छैन् । उनले पछिल्लो समयमा काम पाउन छाडेकी छन् । दश बर्ष अघि सांगीतिक क्षेत्रमा बिष्णु माझी आउंदा निक्कै हलचल भयो । धेरैले बिमाकुमारी दुरा, लक्ष्मी न्यौपाने, शर्मिला गुरुङ्को स्वरलाई टक्कर दिने स्वर भन्थे उनको गलालाई । त्यतिबेलाको बजारमा बिमा, लक्ष्मी र शर्मिला ‘हट केक’का रुपम चिनिन्थे ।
फाट्टफुट्ट गीत गाउन थालेपछि बिमा, लक्ष्मी र शर्मिलाको बिकल्पमा उभिन थालिन् बिष्णु माझी । अनि लोक दोहोरीमा एक छत्र राज गर्न थालिन् उनले ।
बिष्णु माझीलाई यो पेशामा स्थापित गराउने श्रेय जान्छ सुन्दरमणी अधिकारीलाई । अधिकारीले नै बिष्णुलाई गायन पेशामा ल्याएका थिए । र, काठमाण्डुमा अधिकारी र माझी ‘लिभिङ् टुगेदर’का रुपमा बस्न थाले । यो खवर सार्वजनिक बहश बन्यो । अन्तत स् अधिकारीले बिष्णु माझीलाई नै बिहे गरे । तर बिहे गरेको कुरा अझैपनि बताउन चाहन्न यी दुई जोडी ।
त्यतिबेला बिष्णु माझीले गीत गाएपछि लिने पारिश्रमिकको रेट ठ्याक्कै यति भन्ने थिएन । २५ सयदेखि गीत गाउन थालेकी बिष्णु माझीले आफ्नो रेट बढाएर एकै चोटी १२ हजार पुर्‍याईन् । रेट बढेसंगै उनको बिकल्प खोजी हुन थाल्यो । सुन्दरमण्ी अधिकारीले भने अनुसार बिष्णुले काम गर्न थालिन् ।क्यासेटको जमाना थियो केही बर्षअघिसम्म त्यतिबेला उनले एक साइडमा मात्रै गीत गाउने घोषणा गरिन् ।
त्यसपछि बिस्तारै यो जोडी सांगीतिक बजारमा अलोकप्रिय हुन थाल्यो । त्यसको पुरै मार अहिले बिष्णु माझीलाई परेको छ । केही बर्ष देखि उनले एउटा गीत गाएको ४० हजार रुपैया लिन थालिन् । जुन नेपाली गीतसंगीतको इतिहासमा अहिलेसम्म कसैले लिने गरेका छैनन् ।
बजार सेलाएर पुरै डामाडोल भएका बेला उनले चालिस हजारमा एउटा गीत गाउन थालेपछि उनको बिकल्पको खुलेर खोजी मात्र भएन, उनले रेकर्डिङ्ग स्टुडियो समेत देख्न मुश्किल पर्न थाल्यो । गीत रेकर्डिङ्गका लागि सवै भन्दा धेरै बोलाउने प्रिज्मा रेकर्डिङ्गकी व्यवस्थापक स्वरुपा रसाइली भन्छिन्‘ बिष्णुको टेक नपरेको धेरै भयो, उनको स्वर राख्न त खोज्छन तर महंगो भनेर आंट नै गर्दैनन् ।’
जव की चालिस हजारमा लोक दोहोरी गीतको एउटा पुरै एल्वम तयारी हुन्छ । बिष्णुले रेट महंगो बनाएपछि उनले व्यवसायिक कलाकारको गीत गाउन पाउन छाडेकी छन् । स्वरुपाका अनुसार नयां नयां रहर गर्नेले मात्रै उनको आवाजमा गीत रेकर्ड गराउन खोज्छन । महिना दुई चार वटा मात्रै गीत गाएर दिन कटाएकी छन उनले । मालश्री रेकर्डिङ्ग स्टुडियोका राम भण्डारीका कुरा पनि उस्तै छन् । राम भन्छन् ‘ पहिला जस्तो बिष्णु माझीले गाउन पाउदिनन्, तर फागुन महिनामा भने केही गीत गाएकी छन् । ’
बिष्णुले चालिस हजार लिन थालेपछि उनको बिकल्पमा पूर्णकला बिसी, देवी घर्ती, टिका पुन, जुना श्रीसलाई लिन थालेका छन व्यवासायीहरुले ।
नाम चलेका कलाकारका लागि विदेश पानी पंधेरो जस्तै हो । तर पांच हजार गीत गाइसकेकी बिष्णुले अझै सम्म विदेशमा पाइला पारेकी छैनन् । यसको सवै अपजस उनका श्रीमान् सुन्दरमणी अधिकारीलाई दिने गर्छन संगीतकर्मीहरु । विदेश मात्र हैन उनी स्वदेशमै हुने मेला महोत्सवमा समेत गएकी छैनन् ।
नाम चलेका देशबाट आएका प्रस्ताव समेत उनका श्रीमान अधिकारीले इन्कार गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि उनी पछ्यौराले मुख छोपेर हिड्ने गर्छिन र कसैको सम्पर्कमा पनि छैनन् ।